★မြန်မာ့အလင်း★: Talks Matthieu Ricard on the habits of happiness
အထက်မှ ဆရာတော်ဟာ မဟာယနဆိုပြီး စိတ်နဲ့ မပြစ်မှားမိဖို့ သတိထားကြပါ။ ဆရာတော်ဟာ ၀ိပဿနာကျင့်စဉ်မှာ နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူဟာ အချိန်ပေါင်းများစွာ ၀ိပဿနာနဲ့အချိန်ပေးထားသူသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ပြောဆိုပုံ သွက်လက်နေတာ သူရဲ့ မွေးဖွားကြီးပျင်းတဲ့ ဒေသနဲ့ မျိုးရိုးဇာတိကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ မယာယနတွေနဲ့ ထေရ၀ါဒဟာ ၀ိပဿနာ ကျင့်စဉ်တွင် အတူတူသာဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ တရားဟောပုံဟာ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ ရိုသေစွာ တရားနာနိုင်ပါသည်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:28 AM
★ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် စိတ်ချမ်းသာကြမယ်…
★ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားသည် တိုးတက်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့ပါသလား
☠ Saudi: Cases of Child Abuse on the Rise
☠ Saudi: Man Accused of Molesting Daughters
☠ Saudi: Women Students HaveaHard Time Dealing With Flirtatious Tutors
☠ Saudi: Sexual Abuse Among 12% of School Kids?
☠ Saudi: Woman to Woman Relationships at Some Schools
☠ Saudi: Why Do Girls Choose to Leave Their Families?
☠ Saudi: Child Molestation —aSerious Approach Needed
● H1N1 Vaccine Deaths in Germany: German doctors issued warning about swine flu jab
● WHO: Novel H1N1 FluaNaturally Circulating Virus, Not FromaLaboratory
● VIDEO: Swine Flu Vaccines. Facts and Myths
● Canada: The Killer H1N1 Vaccine
● CANADA; Dangers of the H1N1 Vaccine Revealed: More than 100,000 Doses Withdrawn
● VIDEO: Athlete Crippled by H1N1 Flu Shot
● Aspirin kills 400% more people than H1N1 swine flu
♬ မင်းလေ့ရခိုင် ငါလေ့ရခိုင်
♬ ဤသည်ရခိုင်သား၊ ဤသည်ကားရခိုင်မြေ